“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” ဆို တဲ့ အမျိုး သ မီး က “ဒီလိုပါ” – Let Pan Daily
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” ဆို တဲ့ အမျိုး သ မီး က “ဒီလိုပါ”
ဘုန်း ဘုန်း ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ ကိုယ်တိုင် ကြုံ တွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးကို ဘုန်းဘုန်းကိုယ်တိုင် ချရေးထားတာလေးပါ။ပြန်လည်မျှဝေပေးပါတယ်။ Photo မူရင်း credit ပေးပါတယ်။
” ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး က “ဒီလို” ပါ။EU ဥရောပသမဂ္ဂ က ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ ချီးမြင့်ထားတဲ့ Sakharov လူ့အခွင့်ရေးကို ၂၂ အောက်တိုဘာလက Strasbourg မြို့ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ပြည်သူ့အသည်းစွဲ ဒကာမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ လက္ခံ ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ ဆုပေးပွဲ အခမ်းနား ကို ဒိန်းမတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမဏီ၊ ဆွစ်ဇာလန် စတဲ့ နိုင်ငံတွေက ဗမာပြည် သားတွေလဲ (အစီစဉ် မပါခဲ့ပေမယ့်) တက်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတန်း အပေါ်ဆုံးတန်းက ထိုင်ပြီး အားပေး ခဲ့ရပါတယ်။
“ဒကာမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ကတော့ ဗမာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ အဲဒီပရိတ်သတ် ထဲမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ သူမ မမြင်တွေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ကိုရွှေတွေက ဇွဲမလျှော့ပဲ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူတွေကို နားပူနားဆာလုပ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်နဲ့ တွေ့ခွင့်ရအောင် တောင်းဆိုကြပါလေရော။ သို့သော် တာဝန်ရှိသူတွေက ဒကာမကြီးဒေါ်စုနှင့် တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ အစီစဉ်မရှိကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ သူ့အစီစဉ်တွေနဲ့သူ ပြည့်နေကြောင်း ရှင်းပြသော်လည်း ကိုရွှေတို့ရဲ့ မလျှော့သော နားပူနားဆာလုပ်မူကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား သူတို့ သွားရောက်ပြီး အကျိုးအကြောင်း ပြောကြ ရပါတော့တယ်။
အဲဒီအခါ ဒကာမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ချက်ချင်းပဲ ဗမာပြည်သူတွေဆိုရင် သူတွေ့ချင်ပါတယ်လို့ ပြောတော့၊ လုံခြုံရေးတွေက ဦးဇင်းတို့ကို ၅မိနစ် ၁၀မိနစ်ခန့်တွေ့နိုင်ကြောင်း သူတို့က အချက်ပြတာနဲ့ ရပ်ကြ လို့ပြောပါတယ်။အစီစဉ်မရှိတဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမို့ ဘာထိုင်ခုံ ဘာစားပွဲမှ ခင်းမထားပါဘူး၊ ဒကာမကြီး သူ့ရဲ့ အစည်းဝေး ခန်း၊ နားနေခန်း ကနေ အစောင့်အကြပ်တွေနဲ့ အခန်းပြင်ဘက်ထွက်အလာမှာ၊ လာတွေ့ကြတဲ့ ဗမာမိသားစုများက သီတင်းကျွတ်အခါ ကြုံနေတာမို့ အမေ့ကို ကန်တော့ချင်ပါတယ်၊
ဆုံးမသြဝါဒလေးလဲ ပြောပေးပါလို့ တောင်းဆိုကြတော့၊ “ကောင်းပြီလေ” ဆိုပြီး မဆိုင်းမတွ ဘာအခင်းမှ ခင်းမထားတဲ့ လူသွားလမ်း ကြမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပြီး၊ “အားလုံးထိုင်ကြ ဒို့ ဦးဇင်းတွေကို အရင် ကန်တော့ကြရအောင်” ဆိုပြီး ဦးဇင်းတို့ကို ရိုကျိုးစွာ ပုဆစ်တုပ်ပြီး ကန်တော့ပါတော့တယ်။အဲဒီ အချိန် အနားမှာရပ်နေကြတဲ့ တာဝန် ရှိသူတွေ အစောင့်အကြပ်တွေဟာ တွေဝေပြီးသွားပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေက “ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအသွင်ကို ဆောင်နေပါတော့တယ်၊ကမ္ဘာကျော်ကြီး၊ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေက လေးစားတဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ် ဆုရှင်ကြီးက ဘာအခင်းမှ မရှိတဲ့၊
လူတိုင်းဖိနပ်နဲ့ နင်းဖြတ်လျှောက်နေတဲ့ ကြမ်းပြင်ကြီး ပေါ် ကို ထိုင်လိုက်ပြီ၊ ပြီးတော့ ဘယ်ကမှန်း မသိတဲ့၊ ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့၊ ဘယ်သူမှ မသိတဲ့ အညတြ ဘုန်းကြီး နှစ်ပါးကို လက်အုပ်ချီပြီး ထိခြင်းငါးပါးနဲ့ ရှိခိုး ကန်တော့နေတဲ့ ဟန်ဟာ အနားမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသား တာဝန်ရှိသူ အစောင့်အကြပ်တွေ အပြင်က လာတွေ့သူဟာ ဗမာမိသားစု တွေကိုပါ အံ့သြစေခဲ့ပါတယ်။အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာလည်း မာန် မာနကို ချိုးနှိမ်ပြီး ဉာဏ်ပညာ ကြီးမားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဒကာမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတဲ့ ပဲ့တင်ထပ်သံတွေဟာသူ့အလိုလို မြည်ဟီးနေပါတော့တယ်။ ကန်တော့ပြီးတဲ့အခါ ဗမာ မိသားစုတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး “ရန်ဖြစ်ကြသေးသလား၊ စကားများကြသေးသလား” လို့မေးပြန်ပါတယ်။
အဲဒီ အခါ လာကြတဲ့ ဗမာ မိသားစုများက “ စကားတော့ များကြပါတယ် အမေ တခါတရံပေါ့” လို့ ပြန်ဖြေကြတော့….“အေး ဒါမှတို့ဗမာပီသမှာ” ဆိုပြီးပြောတာကြောင့် အားလုံးရယ်ရယ် မောမော ရွှင်လန်းသွားကြပါတော့တယ်။“ကိုယ့်နိုင်ငံကို မမေ့ကြနဲ့၊ စွမ်းနိုင်တဲ့ဘက်က တတ်နိုင် သလောက်ကူညီကြ” ဆိုပြီး ဒကာမကြီးက ဆုံးမစကားဆိုပါတယ်။သြော်… နောက်ဆုံးတော့လဲ မြတ်သော မနော၊ မြတ်သော မနော။အကြင်နာ၊ စာနာ၊ စေတနာ စိတ်ထားနဲ့ နိုဘယ်လ် ငြိမ်ချမ်းရေးဆုရှင် ဒကာမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတာ မာန်မာန ကင်းစင်တဲ့ စင်စစ် တည်ငြိမ် ငြိမ်းချမ်း သော ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးပါလား ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပုံကို အမှတ်ရနေမိပါတော့တယ်။ဗမာပြည်သူ ပြည်သားများ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ခေါင်းဆောင်ကို တန်ဖိုးထားနိုင်ကြပါစေ….
ဘုန်းဘုန်း ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ မျှဝေ ပါသည်။
ကြောငျးဆရာမ တှေ ဘာကွောငျ့ အိမျထောငျ မပွုကွတာလဲ?
အိပျမကျတိုငျး မှာ အဓိပ်ပါယျတှေ ရှိတယျ.. အိပျမကျ မကျပွီးရငျ ပွနျကွညျ့ဖို့ သိမျးထား လိုကျပါ။
နွားကို အမဲသား လို့ ခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းလေးပါ (ဗဟုသုတ ဖြစ်ဖတ်ကြည့် )